Himali Khabar कोर्पोरेट Archives - Page3of 14 - Himali Khabar
जीडब्लूएमको ह्याभल जोलियन नेपालमा, यस्ता छन् विशेषता ?
काठमाडौं । जीडब्लूएम नेपालले आकर्षक फिचरहरूसहितको टप भेरिएन्टमा ह्याभल जोलियन कार नेपाल ल्याउने भएको छ । ६० वटा देशहरूमा ६५ लाख भन्दा धेरै बिक्री भइसकेको ह्याभल विगत ११ वर्ष देखि चीनमा एसयूभी बिक्री गर्ने ब्राण्ड हो । आधुनिक र कलात्मक...
काठमाडौं । एप्पलले आइफोन १३ सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आइफोन १३ सँगै आइफोन मिनी सार्वजनिक गरेको हो। आइफोन १३ मा ६.१ इन्चको डिस्प्ले रहेको छ भने मिनी ५.४ इन्चको रहेको छ। यी आइफोनमा दुई वटा...
पठाओको दशैं महोत्सव– राइडरलाई बाइक र सेवाग्राहीलाई आइफोन जित्ने मौका
२८ भाद्र २०७८, सोमबार | Himali Khabar
काठमाडौं । राइड सेयरिङ सेवा पठाओ नेपालले नेपालीहरूको महान चाड बडादशैंको अवसरमा राइडर र सेवाग्राही दुबैलाई लक्षित गरी ‘पठाओ दशैँ महोत्सव’ घोषणा गरेको छ । महोत्सवमा राइडरले टीभीएस बाइक र सेवाग्राहीले आइफोन जित्ने मौका रहेको छ । असोज १ गते...
फेसबुकले सार्वजनिक गर्‍यो स्मार्ट चश्मा, यस्तो छ विशेषता ?
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार | Himali Khabar
काठमाडौं । फेसबुकको बहुप्रतिक्षित स्मार्ट चश्मा सार्वजनिक भएको छ । लक्जरी चश्मा ब्राण्ड रे–बन उत्पादक कम्पनी एसिलर लक्जोटिकासँगको सहकार्यमा फेसबुकले स्मार्ट चश्मा तयार गरेको हो । फेसबुकको स्मार्ट चश्माको नाम ‘रे बन स्टोरिज’ राखिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको स्मार्ट...
आईफोनमा कम्तीमा ७ वर्षसम्म सेक्युरिटी अपडेट दिन जर्मन सरकारको माग
२४ भाद्र २०७८, बिहीबार | Himali Khabar
काठमाडौं । जर्मन सरकारले युरोपियन युनियनलाई बुझाएको वातावरणीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावमा एप्पलले आईफोनको सेक्युरिटी अपडेट कम्तीमा पनि सात वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जर्मनीको अर्थ मन्त्रालयले बुझाएको उक्त प्रस्तावमा एप्पलले आईफोनका स्पेयर पार्टस् सात वर्षसम्मका लागि सुपथ...
अब हुलाकबाटै सात दिनभित्र राहदानी घरमै पुग्ने
काठमाडौं । अब हुलाकमार्फत नै सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै राहदानी पुग्ने भएको छ । राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला, इकाई प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी ओसारपसारका लागि सम्झौता भएको हो । यो सँगै अब राहदानी लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालय...
१० वर्षमा आठ खर्ब ३३ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत
२३ भाद्र २०७८, बुधबार | Himali Khabar
काठमाडौं । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ । दुई वटा परियोजना सम्झौता र...
आइफोन १३ मा नेटवर्क नभए पनि फोन र म्यासेज गर्न मिल्ने
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार | Himali Khabar
काठमाडौं । आइफोन सिरिज १३ देखि २० सेप्टेम्बरभित्रमा आइफोन १३ सार्वजनिक हुने सक्ने सिनेटले जनाएको छ । गत वर्ष कोभिड-१९ का कारण प्रडक्सन ढिला भएको आइफोन १२ अक्टोबर २३ मा सार्वजनिक भएको थियो तर यो वर्ष भने एप्पल पुरानै स्थितिमा...
युनिलिभरले एककित्ता सेयर बराबर ६५० नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको वितरण योग्य नाफाबाट नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिकित्ता सेयर बराबर ६५० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। कम्पनीले गत आर्थिक...
बिक्वाइनको मूल्य फेरी ५० हजारभन्दा माथि
काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्य फेरी ५० हजार डलर नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटक्वाइनको मूल्यप्रति क्वाइन ५१ हजार ३७ डलर पुगेको छ । पछिल्लो समय तीव्र गिरावट भोगिरहेको बिटक्वाइनको मूल्य मे महिना यता पहिलोपटक ५० हजार डलर नाघेको हो...
१९ भाद्र २०७८, शनिबार | Himali Khabar
काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै बन्द रहेको मनकामना केबुलकार आइतबारबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । निषेधाज्ञासँगै गएको वैशाख १६ गतेबाट केबुलकार बन्द भएको थियो । मनकामना दर्शन प्रालिका अध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर केबुलकार सञ्चालन गर्न लागिएको...
जूमले तेस्रो त्रैमासिकमा १ अर्ब २ करोड आम्दानी गर्ने
१६ भाद्र २०७८, बुधबार | Himali Khabar
काठमाडौं । भिडियो कन्फ्रेन्सिङ प्लाटफर्म जूमले चालू वर्ष सन् २०२१ को तेश्रो त्रैमासिकमा १ अर्ब डलर भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जूम भिडियो कम्युनिकेसन इंकद्वारा जारी जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्मको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार यस त्रैमासिकमा कम्पनीको आम्दानी १...